Hakan Çalhanoğlu oo heshiis afka ah la gaarey AC Milan (Daawo xirfaddiisa) – Gool FM
(Leverkusen) 27 Juunyo 2017 – Xilli la sugayo in uu khabar sami kasoo yeero qandaraas kordhinta beryihii dambe cakirnayd ee Donnarumma, ayay kooxda AC Milan sii wadataa howsheeda suuqa kala iibsiga oo ay xagaagan tahay kooxda Yurub oo idil ugu firfircoon.
Waxaa shalay si ka yaabis ah usoo baxday inay wada xaajood meel wanaagsan maraya kula jirto Hakan Calhanoglu oo sida ay qorayaan wargaysyada Jarmanku isagu ogolaaday inuu Milan ku biiro, balse loo baahan yahay inay heshiiyaan labada koox ee Milan ee Bayer Leverkusen.
Hakan Calhanoglu oo 23-jir ah una dhashay Turkiga ayaa ah laacib halis ku ah kubadaha fadhiya sida laadadka xorta ah, isla markaana fiiro wanaagsan, baas macaan oo badanaa saxan iyo toog kulul leh, wuxuuna ka dheeli karaa dadabka bidix ee weerarka, lambarka buuxa iyo xitaa boosaska kale ee khadka dhexe.
Sida ku dhigan Tuttosport, wuxuu laacibkan farsamada badan uu kooxda Montella sii karaa dookhyo badan oo dhanka taatikada ah, maaddaama ay Milan shaxdeeda jirjirroolayn karto iyadoo u kala wareegaysa 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-1-2, 4-4-2 iyo xitaa 3-5-2.
“Waxaannu wada xaajood wanaagsan la galnay AC Milan,” ayuu yiri wakiilka laacibka ee Bektas Demirtas. “Hadda waxaa muhim ah inay labada naadi wada hadlaan oo heshiiyaan. Marka ay sidaa yeelaana, waxaannu wada xaajoodka qaybta ugu dambaysa la dhamaynaynaa AC Milan.” ayuu raaciyay.
Hakan Çalhanoğlu oo aan 4 bilood dheelin ganaax ay Febyaaro FIFA saartay darteed kaddib markii lagu helay gudasho la’aan waajib qandaraas ayaa xilligaa kahor holac ahaa isagoo 7 goolna dhaliyay, 7 kalena dhigay nus-xilli-ciyaareedkii uu dheeley, waxayna Milan ku doonaysaa €20 milyan halka Leverkusen ay ku doonayso €30m laacibkan oo ay 2014 Hamburg kasoo siisteen €14.5m.